Musangano wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa unodimurirwa panzira mushre mekukandirana makobvu nematete kwevaive sachigaro wekomiti iyi uye vari nhengo yakazvimirira, vaTemba mliswa nemumirir weChegutu West vari nhengo yeZanu PF, VaDexter Nduna.
Masangano evarairidzi opesana padanho rekumbomisa kuramwa mabasa, vamwe vachiti masangano aya apindwa napongwe.
Musango weAfrican Union wechimakumi matatu nembiri wopetwa kuAddis Ababa, Ethiopia, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vachishanyira makambani anogadzira machira muEthiopia. Nezuro VaMnangagwa vakakurudzira Africa kuti izvimirire.
Vanorarama nezvirwere zvakaita seBP neshuga vanoti dzimwe nguva havachanwa mishonga yavo sezvakatarwa navanachiremba nekuda kwekuti vanotengesa mishonga iyi vave kuitengesa nemari yekuAmerica.
Chikwata cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kunyura mumakwikwi eCaf Champions League apo chiri kusangana ne AC Horoya yeku Guinea mangwana.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa musangano weAfrican Union, uyo uri kupetwa nhasi kuAdis Ababa, kuEthiopia.